Mabaadi u baahan in boorka laga jafo
Dhibaatada ummadda soomaaliyed ku habsatay mudada ka badan rubac qarniga ma aysan waxyeelan oo kaliya dad, dal iyo duunyo ee waxay si xoog leh dhibaataysay kalsooni iyo mabaadi fara badan oo runtii jiritaan ummadeed udub dhexaad u ah, mabaadiida ka qaloocday ummadda soomaaliyeed waa ay fara badan yihiin waxaana ka mid ah:
Xaq sidiisaba waxaa lagu gartaa xaq ahaantiisa, laakin xaqa laguma garto ragga wada, soomaalida inteeda badan mabda�aas isaga ah wey dhalan rogtay, waxayna u bedeshay xaqa waxaa lagu gartaa ragga wada ama hor boodaya. Tusaale ahaan haddii uu wadaad kalmed diini ah sheego, waxaa dadka qaar u caado ah inay yiraahdaan waa reerkee iyo wax la mid ah (subxaanallaah)!!!!warkiiba daa qofkii ka hadlaya arimo siyaasadeed taa waxaa sahlan in aragtidiisa la beeleeyo.
Arintaan iyada ahi waa mida ugu khatarsan oo ay soomaalida dhaxalsiiyeen dagaaladii sokeeye waana tan keenta mar walba in wixii nidaam ah ee yimaada la diido iyada oo sababta loo diidayo ay tahay dadka howsha wada oo beel ahaan loo diidayo iyada oo aan arinka loo eegin xaq iyo xaq la�aan toona.
Waa waddan cadaw u ah ummadda soomaaliyeed sababtoo ah waxay gumeysataa dhul iyo dad soomaaliyeed intaa waxaa u dheer dhibka ummadda soomaaliyeed haysto meel kale kama imaan bilaw iyo dhammaad Itoobiya ayaa aabbe u ah waxyaabaha is badalay waxaa ka mid ah in Itoobiya ay noqotay saaxiib ku soo dabaalaya ummadda soomaaliyeed nabad iyo kala dambeyn. !!Yaa ilaahii war dadku goormuu caqligoodu sidaa u fasaqmay. mayee arinkaan wuxuu kamid yahay mabaadida ay dagaaladii sokeeye bedeleen cadawga ummaduna uu ka faa�iideystay isaga oo isticmaalayo xeelado iyo xoola badan.
Shacabka soomaaliyeed waa shacab kulansaday dhammaan sifooyinka mideeya dad wadan wada daga sida: diinta, afka, midabka iyo dhaqanka. Laakiin dhibaatooyinkii sokeeye waxay gilgileen kalsoonidii midnimada ummadda soomaaliyeed taana waa arin khatarteeda leh una baahan in waxgaradku ku baraarugo.
Dad badan markaad la sheekeysato waxaad ka maqleysaa dowlad waa laga reystay dadkii xoriyad iyo dhaqaale ayey heleen, qaarkoodna waxaadba arkaysaa inaysan dareensanayn maqnaanshaha dowlad arinkaana waa arin ka mid ah arimihii uu na dhaxalsiiyay dagaalkii sokeeye una baahan in la saxo.
Mabaadidaa iyo kuwa badan oo asaasi ah oo qaloocday rubac qarnigii ugu dambeeyay taariikhda soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inla saxo si jiilka soo koraya xaqu uusan baadil ugu noqon. Baadilkuna xaq. Si marka sixitaankaa loo helo waa inuu qof walba oo soomaali ah marka hore Alle ka cabsado caddaaladana aan laga fogaanin. sheegidda xaqana aan cid looga heybeysan, cidnana aan lagu raali galin.